Tombontsoa amin'ny fanekena cryptocurrency ho fandoavam-bola - Victor Mochere
Hatramin'ny namoronana ny vola nomerika voalohany, bitcoin, dia nanomboka ny revolisiona ara-bola tena izy teto amin'izao tontolo izao. Ary ny cryptocurrencies dia mbola hita amin'ny fomba hafa. Ny sasany dia mahita izany ho zava-misy fandoavam-bola vaovao, ny sasany te-hahazo vola amin'ny crypto fotsiny, ary ny hafa dia misalasala ary mihevitra azy io ho toy ny tranga mihelina fotsiny.
Na izany aza, raha jerena amin'ny ankapobeny, ny vola dizitaly dia tokony hamonjy antsika amin'ny banky sy ny mpandrindra, ny vaomiera ary ny sarany. Mora kokoa sy mora ampiasaina izy ireo. Ny orinasa dia liana amin'ny crypto satria mitady fomba fiasa azo antoka sy mahomby kokoa. Betsaka ny orinasa efa manaiky ny vola nomerika ho fandoavam-bola.
Inona no atao hoe cryptocurrency
Aiza no handoavam-bola amin'ny crypto
Tombontsoa amin'ny fifanakalozana crypto
Raha tsorina, ny cryptocurrency dia vola dizitaly vita amin'ny vola madinika. Ny vola madinika dia voaaro amin'ny hosoka satria fampahalalana voatahiry tsy azo adika. Noho izany, ny anarana dia ampahany amin'ny "crypto". Cryptocurrency dia tsy misy afa-tsy amin'ny Internet. Tsy afaka manonta, mikitika na mitondra azy any amin'ny banky ianao mba halefa any amin'ny kaontinao elektronika. Tsy voafehy ny sandany, ka tsy mety hisy fiantraikany amin’izany ny fidangan’ny vidim-piainana. Na ny banky, na ny governemanta, na ny mpamorona ny cryptocurrency dia tsy afaka miditra amin'izany.
Raha ny marina, ny cryptocurrency dia voatahiry ao amin'ny blockchain - rafitra tsy misy mpanara-maso tokana. Ny blockchain dia tantanin'ny mpandray anjara maro. Namboarina tamin'ny kajy matematika, ny rafitra dia miaro ny vola nomerika amin'ny hosoka na hacking. Raha mitady toerana hividianana cryptocurrency ianao, dia manana safidy maromaro ianao. Mpanakalo an-tserasera na ivelan'ny aterineto, fifanakalozana crypto, sehatra P2P, terminal - ny iray amin'ireo dia azo ekena.
Ny fanodinana Crypto dia fotoana tsara hanolorana fomba fandoavam-bola fanampiny ho an'ny mpanjifa. Maro amin'ireo fivarotana sy serivisy an-tserasera no efa manaiky ny vola crypto, satria hitan'izy ireo ho loharanon'ny fitomboany amin'ny ho avy izany. Noho izany, ny fisehoan'ny tranokala iray handoavana ny andrana amin'ny fampiasana cryptocurrency ho an'ny mpampiasa aterineto amin'izao fotoana izao dia tsy fanavaozana intsony. Ary mahazatra - manoratra lahatsoratra - tsy zavatra tsy azo idirana na sarotra, izay matetika mifandray amin'ny cryptocurrency. Mampiasa io serivisy io izahay amin'ny fiainana andavanandro. Mampiasa vola nomerika amin'ny fiainana andavanandro isika ankehitriny.
Ireto ny sasany amin'ireo tombony azo amin'ny fifanakalozana crypto.
1. Tsy misy famerana faritany
Ny fanakanana ny fifanakalozana cryptocurrency dia saika tsy azo atao. Tombontsoa lehibe ho an'ireo manao fandoavam-bola iraisam-pirenena izany. Afaka mandefa vola virtoaly any amin'ny firenena rehetra ianao ary manaiky ny fandoavam-bola amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, misy ihany koa ny fatiantoka - tsy azonao atao ny manafoana ny fifampiraharahana nalefa. Izany dia mitaky ny mpanjifa ho mailo kokoa rehefa mividy sy mandefa vola. Tsy misy komisiona amin'ny famindrana vola ary tsy ilaina ny mandoa hetra, satria ny bitcoins dia tsy mifamatotra amin'ny firenena ary tsy afaka mitaona azy ireo ny governemanta.
Ny fahamendrehana dia iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny fanapariahana ara-bola noho ny fanapariahana. Ny fifampiraharahana fehezin'ny foibe, izany hoe ny banky dia afaka mandà azy ireo, mivaingana, sns. Ny fifanakalozana Cryptocurrency dia tsy voafehin'ny na inona na inona, ka tsy azo foanana. Tsy misy afaka manakana ny fifanakalozana cryptocurrency. Ary koa, ny cryptocurrency decentralized dia manamora ny fampitomboana orinasa. Raha mivarotra vokatra na serivisy ianao, ny crypto dia ahafahanao manaiky malalaka ny fandoavam-bola avy any ivelany, manitatra ny mpihaino anao ary manatsara ny asanao.
3. Haingam-pandeha ambony
Tsy mila mpanelanelana amin'ny fifanakalozana ny Crypto, noho izany dia ho tonga haingana kokoa amin'ny kaonty ny vola. Ary satria eo no ho eo ny fifanakalozana dia tsy azo sakanana. Ary koa, tsy ilaina ny fisoratana anarana ho mpandraharaha tsirairay na fikambanana ara-dalàna - afaka manaiky ny fandoavam-bola amin'ny maha-olon-tokana anao ianao, na inona na inona zom-pirenenao.
Ny angona Blockchain dia tsy azo adika na adika. Afenina amin'ny kriptografika izy ireo, ary tsy mora araka ny mety ho hita ny mangalatra na mijirika azy ireo. Saingy mila mahatsiaro ny fiarovana amin'ny fitehirizana tenimiafina avy amin'ny poketra crypto ianao. Raha very azy ireo ianao dia afaka manadino ny fidirana amin'izy ireo.
Ny fampivoarana tsy tapaka ny ecommerce dia nitarika ny fampiharana haingana ny cryptocurrency ho fomba fandoavam-bola. Ary efa nanaporofo ny fiarovana azy na ho an'ny mpandraharaha sy ny mpanjifany. Ka tsy mahagaga raha lasa malaza be ny fampiasana ny cryptocurrencies amin'ny fandoavam-bola. Rehefa dinihina tokoa, ny safidy fandoavam-bola bebe kokoa omen'ny mpandraharaha no mahazo tombony bebe kokoa ho azy. Amin'izany fomba izany dia afaka misarika mpihaino kendrena vaovao ianao, izay aleony mandoa vola amin'ny vola nomerika ihany, ary koa mampitombo ny fiovam-po amin'ny fandoavam-bola.